Izikolo eziBalaseleyo zeZonyango eTexas ngeenkcukacha zazo 2022
Matshi 2, 2022 UAdaeze Nwachukwu
Nalu uluhlu olutyhila ezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango kwii-texas ezibonelela ukwamkelwa kwabafundi basekhaya nakwamanye amazwe.
Ngamagama alula, isikolo sezonyango sisikolo esinekharityhulamu ebanzi ekhokelela ekufumaneni isidanga sonyango. Ukungena kwisikolo sezonyango kuqala ngomnqweno wokufunda iyeza.
Izikolo zonyango zithatha inxaxheba kumbono wokulungiselela abafundi kubugcisa nakwisayensi yamayeza kunye nokubanika ulwazi olufunekayo lokuziqhelanisa neyeza. Phambi kokuthweswa isidanga kwiSikolo sezoNyango, abafundi benziwa ukuba benze amabakala amabini asisiseko; isigaba sokuqala kunye nesigaba seklinikhi.
Abafundi bezonyango bavezwa kumalungu omzimba ahlukeneyo nayo yonke into echaphazela umzimba womntu kunye nempilo. Amanqanaba anikezelwa kubafundi emva koko ngokusekwe koyena mfundi kugxilwe kuye.
Izikolo zonyango azisoloko zifikeleleka kakhulu kubemi abaqhelekileyo yiyo loo nto abantu abaninzi befaka izicelo zokufunda ukuze babancede ngezifundo kunye nezinye iifizi.
Ukuza kuthi ga ngoku, ngaphambili sikhuphe uluhlu malunga ne-11 eyahlukileyo Izifundo zonyango zabafundi bamanye amazwe abafuna ukufunda eCanada kunye neefowuni zabo zesicelo.
Sikwadwelise inani leefayile ze- Izifundo zonyango ezenzelwe ngokukodwa abafundi baseAfrika abafuna ukufunda phesheya.
Zininzi kakhulu izikolo zonyango kwihlabathi liphela kodwa eli nqaku linyanzelwe kwizikolo zonyango eTexas ezineendleko ezahlukeneyo.
Kunzima kangakanani ukungena kwizikolo zonyango zaseTexas?
Ixabisa malini ukuya kwisikolo sezonyango eTexas?
Ndifumana malini njengoGqirha kwiTexas?
Zingaphi izikolo zonyango eTexas?
Uluhlu lweZikolo zezoNyango eTexas
Izikolo zezoNyango eHouston, eTexas
Izikolo zonyango eDallas Texas
Sisiphi esona sikolo sonyango siseTexas?
Izikolo eziBalaseleyo zeZonyango ezi-5 eTexas
Isicelo seZikolo zezoNyango zaseTexas
Iimfuno zokuLungela iMfundo
Umhla weSicelo kunye noMhla wokugqibela
Izinto zokukhathazeka malunga nokuya kwisikolo sezonyango kwiimeko ezininzi ayisiyiyo indleko kuphela kodwa nendlela yokungena nayo. I-Texas lelinye lawona mazwe alula ukungena kwisikolo sezonyango ngokusekwe kwiipesenti zabo zokwamkela.
Oku ikakhulu kungenxa yokuba umthetho welizwe ufuna ukuba izikolo zikarhulumente zamkele malunga ne-90%, abafundi baseburhulumenteni. Ngapha koko, kunzima kakhulu ukuba abafundi bamanye amazwe bangene kwizikolo zonyango eTexas. Olunye uphawu olukhulu lokwamkelwa kwisikolo sezonyango kukungenisa eyakho Isicelo seAMCAS kwangexesha ngokwaneleyo.
PHAWULAI-AMCAS sisifinyezo segama elithi Inkonzo yesicelo sekholeji yaseMelika.
Iindleko ziyahluka ngokwezikolo ezahlukileyo nangona kungekho mahluko ungako, umzekelo ngeli lixa ubume bokufunda kunye nemirhumo yeYunivesithi yaseMexico yi- $ 19,010, yeTexas Tech University yezeMpilo kwiZiko lezeMpilo yi- $ 18,808.
Inyani yile, ngelixa kungekho manani athile kuzo zonke izikolo zonyango eTexas, ubuncinci kukho uluhlu lwamanani ekufuneka unalo engqondweni ngelixa uthumela isicelo. Kubalulekile ukuba wazi ukuba indleko zezikolo ezichazwe apha ngasentla zezona zikolo zibiza ixabiso eliphantsi eMelika.
Ngokubanzi, iZikolo zezoNyango zibiza kakhulu ngendlela engathandekiyo kunye nezinye izikolo, ezinye izikolo ezikumgangatho wokufunda zide zafikelela ngaphezulu kwe- $ 60,000.
Wonke umntu uyangxama malunga nokuzama ukungena kwiSikolo sezoNyango ngokuyinxenye ngenxa yokuthanda kwakhe amayeza kunye nokufumana inzuzo kwezonyango. E-Texas, oogqirha bahlawulwa umvuzo ophakamileyo $352,745 kwaye iphantsi njenge $20,822. Umvuzo ophakathi ofumana ugqirha eTexas minyaka le umalunga $186,426.
Okwangoku, zizonke zizikolo ezilishumi elinesine zonyango eTexas enye eyongezelelweyo isalinde ukuvunywa ngokupheleleyo. Kodwa, ngaphandle kwezi zikolo zonyango ze-14 apho unokufumana isidanga, zininzi ezinye izikolo zonyango, amaziko oqeqesho kunye nezikolo zoncedo lwezonyango ngaphakathi kwizixeko zaseTexas kwaye sikwadwelise uninzi lwazo oluseDallas apha.
Sizidwelise ngononophelo ezi yunivesithi siphawula ezikhokelayo kunye neyona ilungileyo phakathi kwabo.
I-Baylor College yezeMedicine.
IYunivesithi yaseTexas I-South Southterntern Medical Center
IYunivesithi yaseTexas yezeMpilo kwiZiko lezeMpilo eHouston
IYunivesithi yeSikolo seLizwi esiManyeneyo seNyango ye-Osteopathic.
IYunivesithi yaseTexas yezoNyango
Ikholeji yaseTexas yeOsteopathic Medicine
I-Texas ye-A & M yeZiko lezeNzululwazi kwiKholeji yezoNyango
Iziko lezeMpilo laseTexas Tech kwiZiko lezeMpilo.
IYunivesithi yaseNorth Texas iZiko leSayensi yezeMpilo
Isikolo sezoNyango iMcGovern
IKholeji yaBaphathiswa boNyango lwezeMpilo
Isikolo seDell Medical
UPaul L. Foster weSikolo sezoNyango.
Isikolo eside seMithi
IDallas neHouston zezona zixeko zidumileyo eTexas ke uninzi lwabafundi abafuna ukufaka isicelo kwiziko lonyango kwinkathalo ye-texas ukwazi ukuba sesiphi isixeko esise-texas esikhona isikolo. Apha ngezantsi kukho uluhlu olufanelekileyo lwezikolo zonyango eHouston kunye nezo ziseDallas ngokwahlukeneyo.
Apha ngezantsi kukho uluhlu lwazo zonke izikolo zonyango eziseHouston, eTexas.
Iziko leYunivesithi yaseTexas lezeMpilo
Apha ngezantsi kukho uluhlu lwazo zonke izikolo zonyango kunye namaziko oqeqesho kwezonyango eDallas, eTexas
IYunivesithi yaseTexas Southwestern Medical School
IYunivesithi yaseTexas Southwestern School yeZifundo zezeMpilo
Ezonyango kunye namazinyo Isikolo esincedisayo saseDallas
IYunivesithi yaseTexas Southwestern KwiZiko lezeMpilo
University of American YeSt Vincent
Impilo yeParkland kunye Inkqubo yeSibhedlele-iMfundo yezoNyango
Iziko lezonyango iAlfa Dallas
Ugqirha wakho Isikolo esincedisayo
Iklinikhi ePhambili IZiko le-Esthetics (ACEI)
Uqeqesho lwezeMpilo lwePCI Center
I-Texas Neuro Spine iziko
Isiqinisekiso seCPR Dallas
Intliziyo yaseTexas CPR uqeqesho
IYunivesithi Isikolo seTexas seMpilo kaRhulumente eDallas
KwiKholeji yaseRemington Ikhampasi yaseDallas
Esona sikolo sonyango siseTexas ukuza kuthi ga ngoku liziko lezonyango laseTexas kumazantsi mpuma, linezizathu ezivakalayo. Ngenye yezona ndawo zonyango ezidumileyo emhlabeni ezaziwa ngobuchule bayo, inqanaba eliphezulu lophando, izifundo ezifikelelekayo kunye namathuba emisebenzi alungileyo kubafundi bakhe.
Isikhululo seKholeji yase-Texas A & M
IYunivesithi yaseTexas yonyango
IZiko lezeNzululwazi leYunivesithi yaseTexas eHouston.
Ezi zikolo zezona zikolo ziphezulu zi-5 zonyango onokuzifumana kwi-texas kwaye bonke beme uvavanyo lwexesha njengeentshatsheli kwimfundo yezonyango.
IYunivesithi yaseTexas I-South Southterntern Medical Center: Isikolo siseDallas Texas kwaye sasekwa e1943 nangona ikholeji yayo yamayeza yeza kamva kwi1996. Sesona sikolo sikhulu kwezonyango eTexas.
Iziko lonyango elisemazantsi-ntshona linabasebenzi abasisigxina abayi-13,568 kunye neerekhodi ezimalunga ne-2.7 yezigidi zokundwendwela ngaphandle kwabaguli minyaka le.
Izifundo zesidanga sokuqala kunye neefizi apha zitshintsha phantse minyaka le kodwa ayisiyonto imbi kangako, malunga 20,000 USD kubafundi basekhaya.
Isikolo saziwa kwihlabathi liphela ngophando kunye nenkqubela phambili eqhubekayo. Iyaqwalaselwa njengeyona intle kweli lizwe nangaphaya kokuphucula inkqubo yabo yemfundo yezonyango kunye noqeqesho lwabo lweklinikhi nakwisayensi.
Ukwamkelwa kwiYunivesithi yaseTexas kwiZiko lezoNyango laseNtshona eTexas akukho lula kwaye akunzima kangako. Ukuba unerekhodi elungileyo yokufunda, uhlangabezana nazo zonke iimfuno zokwamkelwa kwaye ufake isicelo ngexesha, kukho ithuba lokuba uya kwamkelwa.
Isikhululo seKholeji yase-Texas A & M: Yiyunivesithi yophando yoluntu kwisikhululo sekholeji, eTexas eyasekwa kwi-1876 kodwa ikholeji yayo yezoNyango yamiselwa kamva kwi-1977.
Umzimba wabafundi weTexas A&M ithathwa njengeyona inkulu eMelika. Umhla wokugqibela wesicelo sekwindla uhlala u-Disemba 1 ngonyaka.
Isikolo siqhuba kwinkqubo yokufunda yeminyaka emine kwaye samkela kuphela abagqatswa abagqwesileyo, oko kukuthi, ukungena eTexas A&M kufuna wonke umsebenzi onzima umntu anokuwufumana kunye nokuzimisela ngangokunokwenzeka.
Amanqaku aphezulu e-SAT kunye ne-ACT angama-600- 800 ayafuneka. Imali yesicelo yi- $ 75. Ikholeji yezoNyango ine-166 yexesha elizeleyo labasebenzi. Ikholeji ibonelela nge-MD, MD / Ph.D., MD / MPH, MD / MBA kunye neenkqubo ezininzi ezimbini. Okwesibini kuluhlu lwezona zikolo zi-5 zibalaseleyo kwezonyango eTexas.
Baylor College of Medicine: Eyaziwa njenge-BCM, yiyunivesithi yezempilo yabucala eyaziwayo ngokugqwesa kwayo kunye nodumo oluphezulu kwezonyango. Ime eHouston, eTexas eMelika. Ukungena kwi-BCM kwizifundo zesidanga sokuqala, umntu kufuneka abe nobuncinci bonyuka, kwinqanaba le-avareji yenqanaba (GPA) le-3.0 kwinqanaba le-4.
Abasebenzi bezemfundo kwi-BCM bafikelela kwi-5,486 ye-faculty: 3,158 ngokusisigxina; I-609 yexeshana; Bayi-1,594 125 ngokuzithandela; 1 ezivelayo. Isikolo sezonyango i-Baylor sinomhla wokugqibela wesicelo se-XNUMX kaNovemba ngonyaka.
Abafundi baseBCM babandakanyeka kwimisebenzi yokufunda ebanceda ekwenzeni oogqirha abanobuchule obungcono ekupheleni kokuhlala kwabo kwisikolo sezonyango.
IYunivesithi yaseTexas yonyango: Eli liziko lezenzululwazi kwezempilo eGalveston, eTexas. Esi sesinye sezona zikolo zindala kwezonyango eTexas, ezinabasebenzi abamalunga ne-11,000.
Isikolo safumana isibonelelo se- $ 560 yezigidi. Yayisungulwa kwi-1891 njengeDyunivesithi yaseTexas yezoNyango. Okwangoku kukho malunga nezikolo ezine, amaziko amathathu okufundela phambili, ilayibrari yezonyango epheleleyo, izibhedlele ezikwiindawo ezine kunye nezibonelelo zonyango ezininzi. IYunivesithi yaseTexas yezoNyango ibandakanya izikolo ezine:
Isikolo sezoNyango, isiDanga kwisikolo seNzululwazi yezoBomi, iSikolo sabaNesi, iSikolo sezeMpilo. Abaphumelele kwi-UTMB bavulelekile kumathuba emisebenzi anomvuzo nokhuphiswano. Kukho ngaphezulu kwe-3200 yabafundi kunye ne-900 faculty.
IYunivesithi yaseTexas iZiko leSayensi yezeMpilo eTexas eHouston: Le yunivesithi yezempilo ebanzi eTexas. Ime kwiZiko lonyango laseTexas, elona ziko likhulu lezonyango emhlabeni. Yayisungulwa kwi-1972 yiYunivesithi yaseTexas iBhodi yeeRegents.
Ukwamkelwa kwiziko lezenzululwazi yezempilo kunokuba kuso nasiphi na kwezi zikolo zilandelayo: Isikolo samabanga aphakamileyo seSayensi yezoBomi, iSikolo sezoNyango-MD, isikolo sezonyango-uphando lweklinikhi ye-MS, iSikolo se-Biomedical Informatics, iSikolo seDentistry, iSikolo sabahlengikazi, iSikolo seMpilo kaRhulumente. , UT MD Anderson weSikolo soBugcisa bezeMpilo, iYunivesithi yaseTexas yezeMpilo kwiZiko lezeMpilo eTyler.
Isikolo sifumana amawaka ezicelo minyaka le nangona kungona zingenayo kuphela. Abafundi bafundiswa amayeza okuqala kwaye banikwa amathuba okuziqhelanisa nethiyori abayifundiswayo kumagumbi okufundela kumaziko ophando esikolo nakwiilebhu.
Apha ngezantsi unokwenza isicelo sokwamkelwa kwisikolo sezonyango kwi-texas. Isicelo sesikolo sezonyango saseTexas asikho nzima njengokuba ucinga, ukuba ulandela isikhokelo esingezantsi, uya kuba nakho ukugqiba isicelo sakho sesikolo sezonyango ngempumelelo.
Ukulungela ukwamkelwa kwisikolo osithandayo, esonyango lwezilwanyana okanye esamazinyo, abafaki-zicelo kufuneka benze isicelo IiNkonzo zoNyango lweZikolo zaseTexas kunye neZinyo (TMDSAS), abahlali baseTexas banokufaka isicelo ngokusebenzisa i Iinkonzo eziDibeneyo zeZikolo zaseMelika zamazinyo zeNkonzo (AADSAS).
Nangona kunjalo, kwiinkqubo zokuthweswa izidanga, ezinye izikolo zineqonga lesicelo esikhethekileyo esaziwa njenge Inkonzo yesicelo sekholeji yaseMelika (i-AMCAS) Apho abafaki-zicelo kufuneka bafake izicelo, ngaphandle kwezi zikolo zidweliswe apha ngezantsi, abaviwa banokufaka izicelo zokuthweswa izidanga kuwo nawaphi na amaqonga angentla.
Izikolo zezi; Isikolo seYunivesithi yaseTexas Southwestern Medical, i-UT yezoNyango eGalveston, iSikolo sezoNyango iMcGovern, iSikolo esiPhezulu sezoNyango, iTexas A&M HSC College of Medicine, kunye neTexas Tech HSC-Lubbock
Kuyimfuneko ukuba abafaki zicelo bafunde iimfuno zemfundo ukuze bazi ukuba yintoni efunekayo ngaphambi kokuba baqale isicelo.
Abafakizicelo kufuneka bagqibe ubuncinci beeyure ezingama-90 zeeyure (okanye iiyure ezili-134 zekota) kwikholeji yase-US okanye kwikholeji yaseCanada okanye eyunivesithi.
Zonke iimfuno zangaphambi konyango kufuneka ukuba zigqityiwe kwindawo eyamkelweyo yaseMelika okanye eyunivesithi / kwikholeji yaseCanada.
Umsebenzi wasemzini awuyi kubala ukuhlangabezana nazo naziphi na izinto ezifuneka kuqala, nokuba unikwe ikhredithi yi-US okanye isikolo saseCanada
Zonke izicelo zenziwa kwi-intanethi ngemali yesicelo engabuyiswayo ye- $ 185 eya kuthi ihlawulwe kwi-Intanethi kusetyenziswa ikhadi lekhredithi / ledebhithi.
Onke amaxwebhu esicelo, kubandakanya iifom zezicelo ezisisiseko, okubhaliweyo, kweencwadi zovavanyo, njl.njl., Makungeniswe ngaphambi kwexesha elimiselweyo. Imihla emiselweyo kunye nemihla ebalulekileyo kumjikelo ngamnye wokuNgena woNyaka zidweliswe kwi Ixesha elibekiweyo kunye nemihla ebalulekileyo.
Okokugqibela, emva kokuba ungenise isicelo sakho, i-TMDSAS iya kuqwalasela kwaye ihambise isicelo sakho kwizikolo ozikhethileyo kwisicelo sakho.
Ukuze isicelo sakho siqhubekeke kufuneka ungenise oku kulandelayo I-TMDSAS;
I sicelo soTywala
Ikopi yeVisa okanye iKhadi lokuhlala ngokusisigxina (ukuba kufanelekile)
AmaBakala aSentwasahlobo aNgoku (okanye amanqanaba ebusika akhoyo, ukuba ikota yenkqubo)
Amanye amanyathelo ayimfuneko zezi;
Thumela eyakho Amanqaku e-MCAT ukuya kwiTMDSAS.
Qiniseka ukuba uyazazi iimfuno zakho Iileta zoVavanyo nendlela yokubathumela kwiTMDSAS.
Uya kucelwa ukuba uthumele kuphela Imiqulu xa iceliwe yiTMDSAS. Nceda uqaphele ukuba olu lutshintsho kumjikelo wesicelo sangaphambili, kwaye bonke abafaki-zicelo baya kulindeleka ukuba balandele inkqubo entsha ngokulinda ukuthumela okubhaliweyo de bacelwe. Ukwahluka zezi zilandelayo:
Abafakizicelo abenza isicelo kwi Isigqibo sakuqala iinkqubo
Abafakizicelo ababhalise Isiqalo esitsha inkqubo
Ukuqhutywa kwesicelo kuhlala kuthatha malunga neeveki ezi-2-4. Uya kufumana i-imeyile xa isicelo sakho sigqityiwe kwaye sithunyelwe kwizikolo obufake kuzo isicelo. Qinisekisa ukulandela @TMDSASsupport Kwi-Twitter yamaxesha okulungisa.
Ukuba ulandela le nkqubo ingentla ngokuchanekileyo, isicelo sakho saseTexas sezonyango siya kuphumelela.
Izikolo zeZonyango ezingafikelelekiyo eTexasIzikolo eziBalaseleyo zeZonyango eTexasIzikolo ezifanelekileyo zoNyango eTexasIzikolo zonyango kwiidallas texasIzikolo zonyango eHouston TexasIzikolo zonyango ezicetyiswayo eTexasIzikolo eziPhezulu zezoNyango eTexas
Post Previous:Izifundo zasimahla ze-Intanethi ze-14 ezinesiQinisekiso
Okulandelayo Post:I-7 iidyunivesithi ezincinci ezincinci eCanada
Pingback: Izikolo ezili-10 zezoNyango Ezona zinzima ekuNgenwe kuzo [Indlela yokwamkelwa] 2022
Linda yunita uthi:
January 18, 2021 apha 4: 57 pm
Ngaba ndingasifaka isicelo sesikolo samayeza ndithweswe isidanga nokuba ndineminyaka yobudala engama-31 ngoku?
February 2, 2021 kwi 7: 36 pm
UDechasa Feyisa uthi:
Novemba 5, 2020 kwi-1: 08 pm
Ukuba umfundi wezonyango ubhalise kwisikolo sezonyango e-Ethiopia, ndingafumana inkxaso-mali yokufunda e-USA?
Novemba 8, 2020 kwi-8: 55
Ukuba uthathelwa ingqalelo ukwamkelwa eyunivesithi yase-US, unokulungela ukufumana izifundiswa apho.